Ingabe Umthetho Wezimo Ezingalindelekile uyasebenza ekubhukheni kwami ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ingabe Umthetho Wezimo Ezingalindelekile uyasebenza ekubhukheni kwami ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19? – isihloko sosizo
Icebiso: Kufanele uhlangabezane nemibandela ethile ukuze ukhansele ngaphansi Kwenqubomgomo yethu Yezimo Ezingalindelekile, kodwa ungakwazi njalo ukukhansela ngokuvumelana nenqubomgomo yokukhansela yombungazi wakho. Ngenkathi usesha izindawo zokuhlala, sebenzisa isihlungi esithi Ukukhansela okushintshashintshana nezimo ukuze ukhethe ukuhlala okukusebenzela kangcono.
Isihloko sethu esisemthethwenisichaza kabanzi ngendlela Umthetho Wezimo Ezingalindelekile osebenza ngayo ekukhanseleni ngenxa ye-COVID-19.
Nasi isifinyezo ukukusiza unqume ukuthi ukubhukha kwakho kuyafaneleka yini.
Uma ubhukhe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo, ukubhukha kwakho kuyafanelekela uma konke lokhu okulandelayo kuyiqiniso
Usuku lokungena lusezinsukwini ezingu-45 ezizayo
futhi ubhubhane luyakuvimbela ukuba uqedele ukubhukha kwakho
Uma zonke lezo zinto ziyiqiniso, ungakwazi ukukukhansela ngokwakho futhi uzonikezwa izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali phakathi nenqubo. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka ubhale phansi noma ufakazele ukuthi awukwazi ukuqedela uhambo lwakho ngenxa ye-COVID-19.
Uma ubhukhe ngemva kuka-March 14, 2020, ukubhukha kwakho kuyafaneleka uma konke okulandelayo kuyiqiniso
Usuku lwakho lokungena lusezinsukwini ezingu-14 ezilandelayo
futhi wena noma esinye isivakashi eqenjini ohamba nalo siyagula manje siphethwe yi-COVID-19
Uma zonke lezo zinto ziyiqiniso, ungakhansela ngokuthintana neqembu elisiza umphakathi wethu. Sizokubuza ukuze sikuqinisekise lokhu ngamadokhumenti (njengemiphumela yethesti ye-COVID-19), lapho kuvumeleke khona ngokomthetho. I-akhawunti yakho izovinjelwa okwesikhashana ekwenzeni ukubhukha okusha, futhi noma yikuphi ukubhukha okuzayo ezinsukwini ezingu-14 ezilandelayo kuzokhanselwa.
Uma ungafaneleki futhi ukhansela, ukubuyiselwa kwemali yakho kunqunywa yinqubomgomo yokukhansela yombungazi wakho, futhi sizokhombisa isamba semali yakho ebuyiselwayo ngaphambi kokuthi uqinisekise ukukhansela. Kulokhu, ukukhokhelwa kombungazi nezimali ezibuyiselwayo zesivakashi zikhishwa ngokuvumelana nenqubomgomo yokukhansela yombungazi oye wayamukela ngenkathi ubhukha.
Qaphela: Lapho ukubhukha kukhanselwa, i-Airbnb ikhipha noma yikuphi ukukhokhelwa okufanele kuye kumbungazi nanoma iyiphi imali ebuyiselwayo okufanele iye esivakashini ngokuvumelana nepholisi yokukhansela yombungazi. Ngenxa yaleso sizathu, ukubhukha okukhanselwe ngaphambi kokumenyezelwa kwekhavareji noma ukwandiswa kwayo ngeke kucatshangelwe kabusha.
Okunye uma ukubhukha kwakho kungafaneleki
Uma izinhlelo zakho zishintshashintsha nezimo, ungase ucabangele ukusebenza nombungazi wakho ukuze ushintshele ukubhukha osukwini lwesikhathi esizayo.
Ungase futhi uthinte umbungazi wakho ukuze ucele ukubuyiselwa imali eyengeziwe, futhi uma evuma, angasebenzisa Isikhungo Sesixazululo ukuze adlulisele imali ngokuphephile kuwe.
Uma ungakakhanseli noma wangena ekubhukheni kwakho, ungathintana neqembu elisiza umphakathi wethu ucele usizo.
Qaphela ukuthi izinqubomgomo ezahlukahlukene ziyasebenza ekubhukheni kwasekhaya e-mainland China nokubhukhwa kwe-Luxe noma kwe-Luxury Retreats.